Inona no maha-zava-dehibe ny mpisolovava fianjeran'ny fiara | Orinasa Mpampanoa lalàna
Zava-dehibe ny mpisolovava iray amin'ny lozam-pifamoivoizana indrindra rehefa manana fiara ianao. Ny lozam-pifamoivoizana eo an-toerana ankehitriny any anaty fiara dia matetika no miteraka fahavoazana lehibe, ary ny tsy fitandremana sy ny tsy fihoaram-peon'ny mpamily no mahatonga ny ankamaroan'ny lozam-pifamoivoizana. Ireo mpamily mamo izay mamo dia tokony hokarakarain'ny mpisolovava DUI. Ny fambara tsy mety amin'ny fifamoivoizana miaraka amin'ny fiara sy kodiarana tsy voamarina ary ny lalana tsy dia voamarina dia mety hiteraka ratra sy lozam-pifamoivoizana mahafaty. Ilaina ny mametraka raharaha rehefa maratra ny iray ary tsy noraharahaina ilay ampahany hafa. Toy izany koa, raha sendra ratra dia ilaina matetika ny olona iray hiaro tena amin'ny fitoriana atao, miaraka amin'ny fanampian'ny mpisolovava mpamaky fiara. Noho izany, ny fisoratana anarana ho serivisy ho an'ny mpisolovava dia nivadika ho zava-dehibe. Ny lalàna mifehy ny lozam-pifamoivoizana dia mety ho sarotra sy maro karazana.
Fa maninona no mila mpisolovava amin'ny lozam-pifamoivoizana ianao?
Ireo mpisolovava misahana ny lozam-pifamoivoizana avy amin'ny orinasan-dalàna mandratra lozam-pifamoivoizana dia manana fahatakarana betsaka momba ireo lafiny ara-dalàna isan-karazany, izay mitaona ny tranga fianjerana fiara. Mahafantatra momba ny fitakiana sy ny fizotrany izy ireo, izay tokony harahina rehefa miaro na miakatra fitoriana. Fombafomba sy taratasy maro no tsy maintsy vitaina. Ireo dia mety hifandray amin'ny famenoana endrika izay manan-danja, mifandraika amin'ny masinina mpitsara sy orinasa fiantohana samihafa.
Hevitra diso iray mahazatra fa tsy mora ny saram-pandraharahana ataon'ireo mpisolovava amin'ny lozam-pifamoivoizana. Ny fakan-kevitra mialoha dia tsy hatolotry ny mpisolovava manana toerana ambony. Ankoatr'izay dia hita fa maro ny mpisolovava miasa amin'ny vidin'ny vidim-piainana mora vidy, izany hoe ny karaman'ny mpisolovava ihany no mahazo karama raha sendra mahazo ilay mpangataka. Tena tsara mpisolovava eo an-toerana matetika dia tokony hampahafantarina ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny sarany sy ny mety ho vidin'ny fampianarana, miaraka amin'ny fotoana hahombiazana. Tokony hisy hahafantatra momba ny valiny efa niandrasana an'io raharaha io sy ny mety ho vidiny. Vokatr'izany, ny teti-bolany mba hananana serivisy fahaiza-manaon'ny mpisolovava iray dia tokony omen'ny mpiangavy fangatahana azy. Ny toro-hevitra momba ny tolotra matihanina amin'ny mpisolovava amin'ny lozatra amin'ny fiara dia mety ho azo amin'ny alàlan'ny Internet na ny pejy mavo. Ny fampitahana ny vidin-javatra sy ny fanaovana fikarohana kely dia mety hanampy ny olona hanao lisitry ny serivisy ho an'ny mpisolovava amin'ny fiara mety hitranga.
Ny filan'ny mpisolovava amin'ny lozam-pifamoivoizana raha sendra lozam-pifamoivoizana ianao
Voalohany, ny mpisolovava amin'ny lozam-pifamoivoizana dia maneho olona maratra na tafiditra amin'ny fifandonana fiara moto. Misy lalàna manokana mifehy ny lozam-pifamoivoizana, raha sendra mijery Internet ianao - tadiavo ny anao tatitra momba ny lozam-pifamoivoizana an-tserasera an-toerana ary azonao vakiana daholo ny zava-tsarotra atrehin'ny tranga tsirairay sy ny lalàna ampiharina. Tsy maintsy ataonao ny serivisy matihanina amin'ny lozam-pifamoivoizana, indrindra fa rehefa miteraka lozam-pifamoivoizana ianao raha sendra lozam-pifamoivoizana ianao. Satria ny fanjakana samy hafa dia misy lalàna sy fitsipika isan-karazany momba ny zon'ny mpandeha, mpitondra fiara ary mpandeha an-tongotra. Ireo tatitra momba ny lozam-pifamoivoizana dia fijoroana ho vavolombelona avy amin'ireo olona voarohirohy sy niharam-boina ary afaka mianatra avy amin'izy ireo momba ny fomba hitondrana ny raharaha mitovy aminao ianao.
Ho fanampin'izany, tsy maintsy tadidinao fa ny lozam-pifamoivoizana dia afaka manampy anao amin'ny ratra ataon'ny tenanao amin'ny fiantoham-piaranao any amin'ny tribonaly. Raha tsy azonao na ny ankolafy hafa ny andraikitry ny lozam-pifamoivoizana dia asaina manakarama mpisolovava fotsiny ianao.
Na dia ianao aza no tompon'andraikitra amin'ny fiara / tompon'andraikitra amin'ny ratra dia mila mahazo antoka ianao fa mampiasa tsotra ny asan'ny mpisolovava amin'ny ratra manokana mba hanakonana izay andraikitrao fa tsy araraotin'ny mpisolovava sy olona tsy etika. . Tsy hanana fiantohana fiara izy ireo, miampy raha sendra tompon'andraikitra hafa ianao dia azo antoka fa maniry ny fanampian'ny a mpisolovava lozam-pifamoivoizana mba hahazoana antoka fa manome vola anao amin'ny fomba tsy mendrika ho anao manokana ny antoko meloka. Tsy misy olona te hihazona trondro an-tanindrazana ara-dalàna sy ara-dalàna mba hiatrehana ny lozam-piarakodia, ary koa hiantohana ny hahatratrarana ny fanapahana arak'izy ireo; antoko hafa dia mety manapa-kevitra ny hampiasa ny azy manokana mpisolovava lozam-pifamoivoizana. Tokony ho azonao antoka fa manana solontena ara-dalàna koa ianao mba hahazoanao vahaolana izay ankasitrahanao manokana koa.
Ny fitsaram-pitsarana any Dubai dia fiantohana amin'ny lozam-piarakodia
Ny Fitsarana any amin'ny Fitsarana Dubai dia nandefitra ireo lalàna ara-dalàna vaovao nametrahana ireo fepetra hitana ny fahavoazana ho an'ireo orinasa rehefa iharan'ny lozam-pifamoivoizana manokana ny mpiasa ao.
Ny fitsarana kosa, dia nandà ny tsy hitaky ny mpitatitra fandraisana fepetra handray andraikitra.
Ny Fitsarana ambaratonga no namoaka ny fandaniana ara-pitsaboana vokatry ny lozam-piarakodia vokatry ny lozam-piarakodia vokatry ny lozam-pifamoivoizana. Nanapaka izany ny Fitsarana Ambony any Dubai, noho izany, ny mpampiasa dia tokony hanan-jo hitaky ny onjan'ny lozam-pifamoivoizana avy amin'ny mpamatsy fiantohana anao amin'ny môtô naratra tamin'ny ratra ary ny mpiasa miasa amin'ny ratra dia karazana fahavoazana ho an'ny mpampiasa .
Ny fiampangana dia natomboka tamin'ny orinasa fiantohana fiara lava iray izay nanomboka ny lozam-pifamoivoizana, ka naratra mafy ny tenany tamin'ny famotehana tanteraka ilay tranofiara ary koa ny fahafatesan'ny fiara. Io dia namintina ireo fitsipika ara-dalàna teo aloha ary nanapa-kevitra ny orinasa fiantohana tokony handoa rehefa nividy ny raharaha tany amin'ny Fitsarana Cassation ny orinasa fiantohana.
Ny fomba tsara indrindra hahitana mpahay lalàm-pifamoivoizana lehibe rehefa maniry izany ianao
Na iza na iza dia afaka manambara fa izy ireo no mpisolovava lozam-pifamoivoizana tsara indrindra, fa raha manontany ny mpanjifany ianao dia mety hahita ny kalitaon'ny serivisy ataon'izy ireo. Ny tenin'ny vavan'ny mpanjifa dia hampahafantatra anao raha afa-po amin'ny serivisy izy ireo mpisolovava ratra manokana. Azonao atao ihany koa ny manao fikarohana amin'ny Internet mba hahitana tranokala fampirantiana sy forum tsy hitovizan'ny olona amin'ny mpisolovava azy. Tokony handinika ireo izay manana traikefa lehibe amin'ny mpisolovava ianao, tsy tokony hametraka ny fiainanao na ny olon-tianao eo am-pelatanan'ny mpisolovava tsy manana traikefa.